धनगढीमा २३ बषिया महिलाको कसरी गयो ज्यान, श्रीमान्, सासू र नन्दलाई प्रहरीले लियो नियन्त्र’णमा – Sandes Post
टिकटक बनाउदा सेतीमा खसेर बेपत्ता भएकी १९ वर्षीया पवित्रा लम्सालको शव आठ दिनपछि भेटियो
यसरी हटाउनुहोस् केही दिनमै गर्धन वा शरीरमा देखिएको कालोपना
कस्तो रहला तपाईको मंगलबारको भाग्य? असोज ५ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
एक्कासी किन घट्यो १५० सिसी पल्सर बाइक को मूल्य यति धेरै
विदेशी बुहारी ल्याएको छोरो अहिले बे पत्ता छ,सासू बुहारी रु दै घरमा बसेका छन् (भिडियो हेर्नुस्)
महिलाहरुले ३० वर्ष कटेपछि यी ७ परिक्षण गर्नुपर्छ अनिवार्य, नत्र हुनेछ गम्भीर रोगको शिकार!
मुख्य पृष्ठ /News/धनगढीमा २३ बषिया महिलाको कसरी गयो ज्यान, श्रीमान्, सासू र नन्दलाई प्रहरीले लियो नियन्त्र’णमा
धनगढीमा २३ बषिया महिलाको कसरी गयो ज्यान, श्रीमान्, सासू र नन्दलाई प्रहरीले लियो नियन्त्र’णमा
1,5212minutes read
धनगढी । धनगढी उपमहनगरपालिका–३ स्थित विशालनगरमा एक विवाहित महिला आज मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् । विशालनगरस्थित आफ्नो घरको भान्साकोठामा २३ वर्षीया जयन्ती जोशी मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्षकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
घटनाको अनुसन्धानका लागि महिलाका श्रीमान्, सासू र नन्दलाई नियन्त्र’णमा लिइ सोधपुछ भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेतले बताए । मृतकको शव परीक्ष’णका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको बताइएको छ ।
स्थानीयका अनुसार परिवारमा समय–समयमा कलह भइरहेने गरेको थियो । उनको माइती घर कैलालीको पहलमानपुर हो । मृत’क महिलाको झण्डै डेढ वर्षको छोरा छ । उनको शव पोष्टमार्टमका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ ।
परिवारहरुको संलग्तामा ह त्या भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिने तयारी भएका मृ’तक महिलाका बुबा मोहनराज जैशीले जानकारी दिए ।
बेरोजगारी हटाउन सहकारी
पूर्वसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले सहकारीमार्फत प्रयाप्तमात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र बेरोजगारीको समेत समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज ९सिजेएन० ले आज आयोजन गरेको ‘बजेटमा सहकारी समीक्षात्मक भर्चुअल कार्यक्रम’ मा उहाँले सहकारीमार्फत उत्पादन, गरिबी निवारण र पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्न सकिने गरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन भएको बतए ।
बजेटले सहकारीलाई प्रयाप्त अवसर दिएको भन्दै अवसरको फाइदा उठाउनसके झण्डै २६ लाख बेरोजगारलाई सहकारीमार्फत रोजगारी प्रदान गर्न कुनै समस्या नभएको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले राज्यले निषेध गरेकाबाहेक सबै सबै क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नसक्ने बताए । “अब सहकारी उत्पादनमा जानैपर्छ । हामी अघि बढिसकेका छौँ”, उनले भने ।
बजेट सहकारीमैत्री आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने विषय मुख्य भएको उनको भनाइ छ । कृषिमा केन्द्रित गरेर सहकारीलाई अगाडि बढाउन र प्रोत्साहन गर्न बजेट आएको भन्दै अभियानले सहकारीलाई त्यसतर्फ लाग्न उत्साह थप्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बजेटमा सहकारीको स्वनियमनको कुरा आउनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो । राष्ट्रबैंकले सहकारीलाई बेवास्ता गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै उहाँले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र अत्यावश्यक भइसकेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा नदिएकामा गुनासो गरे । “सहकारी बैंकको दुई प्रतिशतमै कर्जा योजना थियो, तर बजेटमा त्यस्तो विषय भने समावेश भएन”, उनले भने ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ ९नेफ्स्कुन० का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी क्षेत्रमा भावनात्मक ढङ्गले जोडिएको र ठोस कार्यक्रम नआएको बताए । डिजिटल फाइनान्सिङ कार्यान्वयनमा जान मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष खेम पाठकले कृषि उत्पादनमा जान प्रोत्साहत गरे पनि कार्यान्वयनमा जान समस्या भएकाले कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन नै, ढिला गरी पैसा दिने कार्यक्रम फ्रिज गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा रहेको प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो औँल्याए ।source nepaliviralnews.com
रातमा बारम्बार निन्द्राबाट बिउँझने मानिसहरुलाई असामायिक मृत्यु हुने संकेत
पत्रकार भाग्य न्यौपाने चढेको मोटरसाइकल दुर्घटना
‘अदुवा चिया र गुर्जाे सेवनले ठीक भयो कोरोना’
भारतमा निपाह भाइरसले मानिसको मृत्यु, नेपालमा सतर्कता अपनाउन सुझाव